नेपालीमा राजनीतिमा ब्याक टु ब्याक फेरि यी तीन नयाँ घटना हुँदै, पहिलो निशानामा ओली एमाले ! – hamrosandesh.com
नेपालीमा राजनीतिमा ब्याक टु ब्याक फेरि यी तीन नयाँ घटना हुँदै, पहिलो निशानामा ओली एमाले !
काठमाडौँ, १३ भदौ ।
नेपालको राजनीतिमा ब्याक टु ब्याक फेरि तीनवटा घटना हुँदैछन् । ती घटनामा पहिलो निशानामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले हुनेछ । यी तीनवटै घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई धक्का लाग्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदैछन् ।
त्यसअघि नै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर ‘राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश २०७८’ निष्क्रिय बनाउने निर्णय गर्न लागेका छन् । जुन प्रयोजनका लागि अध्यादेश आएको हो, त्यो पूरा भइसकेकाले अब अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यो निर्णय गर्न लागेका हुन् ।
दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याए पुग्ने अध्यादेश जारी भएपछि एमाले र जसपा विभाजन भई नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । यस्तै, बागमती प्रदेश र प्रदेश १ सरकार ढल्ने भएको छ ।
दुवै प्रदेशमा हालै मात्र मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएका थिए । बागमतीमा डोरमणि पौडेलको ठाउँमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ मा शेरधन राईको ठाउँमा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर, दुवै प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग खुलेका सांसदले आफूहरू एमालेमा नरहेको जनाएपछि दुवै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुन लागेका हुन् । शाक्य र अचार्य दुवै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग थिए ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि दुवै ओली निकट भएका थिए । बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे र प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने आन्तरिक सहमति गठबन्धन दलबीच भएको छ । प्रदेश १ मा एमालेका १० सांसद एकीकृत समाजवादीसँग खुलेका छन् । जसकारण आचार्य सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
रोजगारीको शिलसिलामा मलेशिया गएका एक नेपाली सम्पर्क बिहिन !
क्वालालम्पुर, १२ असोज । मलेशियामा रोजगारीको सिलसिलामा आएका एक नेपाली परिवार सङ सम्पर्क बिहिन...
वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया पुगेका एक अर्का नेपालीको मृत्यु